White House Down (2013) – MM Subtitles
Video Sources 6136 Views Report Error
အမေရိကန်သမ္မတဂျိမ်းစ်ဆော်ရာဟာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်ရုတ်သိမ်းဖို့ အငြင်းပွားဖွယ်အဆို ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဆန့်ကျင်မှုအချို့နဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ရဲအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂျွန်ကေးလ်က အဆက်အသွယ်တစ်ခုကြောင့် အိမ်ဖြူတော်မှာအလုပ်အင်တာဗျူးဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဂျွန်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ အမ်မလီကေးလ်ဟာဆိုရင်လဲ ငယ်ရွယ်ပေမယ့် နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမ္မတဆော်ရာကို ထောက်ခံအားပေးတဲ့သူ တစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျွန်ဟာသမီးငယ်လေးနဲ့အတူ အိမ်ဖြူတော်မှာ အလုပ်လာလျှောက်ခဲ့ရာမှာ အင်တာဗျူးတဲ့သူက ဂျွန်ရဲ့ကျောင်းနေဖက်ဟောင်း ကာရိုလ်ဖင်နာတီဖြစ်နေပါတယ်။ကာရိုလ်ဟာ ဂျွန်ရဲ့ကျောင်းသားဘဝတုန်းက စရိုက်ကိုသဘောမကျဖြစ်နေပြီး သမ္မတကိုကာကွယ်ဖို့အရည်အချင်းမပြည့်မီဘူးလို့ယူဆကာ အလုပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ ဂျွန်ကတော့ သူ့ကိုမျှော်လင့်တကြီးစောင့်စားနေတဲ့ သမီးငယ်လေးစိတ်ပျက်မှာစိုးပြီး အလုပ်ရခဲ့တယ်လို့လိမ်ပြောထားပါတယ်။ သားအဖနှစ်ယောက် tour အဖွဲ့နဲ့အတူအိမ်ဖြူတော်မှာ လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတုန်း အမ်မလီလေးကအောက်ထပ်ကအိမ်သာဆီ တစ်ယောက်ထဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲအကြမ်းဖက်သမားတစ်စုက အိမ်ဖြူတော်ကိုဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီး tourအဖွဲ့ကိုဓားစာခံအနေနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။သမ္မတဆော်ရာဟာလဲ အတွင်းလူရဲ့သစ္စာဖောက်ခံရလို့ တစ်ယောက်ထဲအကူအညီမဲ့စွာနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ ဓားစာခံဖြစ်နေတဲ့ဂျွန်ဟာ အကြမ်းဖက်သမားရဲ့လက်ကထွက်ပြေးခဲ့ပြီး သမီးငယ်လေးကိုရှာဖွေဖို့အောက်ထပ်ကိုဆင်းအလာမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သမ္မတနဲ့တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်….
ဂျွန်တစ်ယောက် သမ္မတကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေလက်က လွတ်အောင်ကယ်တင်ပေးနိုင်မလား…
အမ်မလီလေးကရော လူဆိုးတွေမတွေ့အောင်ဘယ်လိုပုန်းရှောင်ပြီးနေမလဲဆိုတာ ဒီကားလေးထဲမှာ ရှုစားကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကြောက်ဖို့ကောင်းလှတဲ့နိုင်ငံရေးလောကရဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး သမ္မတဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နောက်ကွယ်မှာ ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုလဲရှိနေတဲ့အတွက် တကယ့်သစ္စာဖောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတာကို အဆုံးထိကြည့်ရှုရင်းအဖြေရှာလိုက်ကြရအောင်ပါ….
IMDb Rating 6.4 202,017 votes
TMDb Rating 6.4 3,346 votes
Download 480p G Drive 466 MB
Download 480p Yandex 466 MB
Download 720p G Drive 781 MB
Download 720p Yandex 781 MB